मण्डला थिएटरमा ‘लाटीको छोरो’ (फोटो फिचर)  OnlineKhabar
बिहीबार, ७ असार, २०७५
मण्डला थिएटरमा ‘लाटीको छोरो’ (फोटो फिचर)
२६ भदौ, काठमाडौं । सुलक्षण भारतीयको लेखन तथा निर्देशन रहेको नाटक ‘लाटीको छोरो’ हाल मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको छ । तराईको परिवेश बोकेको सो नाटकमार्फत पुराना अभिनेता टीका पहाडी ३६ वर्षपछि रंगमञ्चमा फर्केका छन् ।
नाटकको सह निर्देशन अर्चना पन्थीले गरेकी हुन् । उनले यसअघि ‘माधवी’ नाटकमा अाफ्नो कला प्रर्दशन गरिसकेकी छिन् ।
यस नाटकमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेकी छन् केनिपा सिंहले । उनी श्रवण शक्ति नभएकी महिलाको भूमिकामा छिन् । नाटकमा पशुपति राई, राजन काफ्ले, सन्दिप लामिछाने, प्रकाश दाहाल, कुन्दन चौधरी, रियर राई, रोशन सुवेदीलगायतको अभिनय छ ।
अभिनेता पहाडी नेपाली चलचित्रमा कहलिएका नाम हुन् । यद्यपि उनको रंगमञ्चतर्फको यात्रा भने कमैलाई थाहा छ । पछिल्लो समय उनले ०३३ सालमा नाटकमा अभिनय गरेका थिए । तर, त्यसपश्चात ठूलो पर्दाको फिल्ममा जमेपछि उनले नाटकलाई बिर्सेका थिए । ३६ वर्षपछि उनलाई रंगमञ्चमा पाएर दर्शकहरु निकै खुशी भएका छन् ।
पहाडीको अभिनय पनि निकै दमदार छ । थुप्रै दर्शकहरु पहाडीको नाम सुनेर नाटक हेर्न तानिएका छन् । यो नाटक असोज ८ सम्म प्रदर्शन हुनेछ ।
२०७४ भदौ २६ गते १४:४७ मा प्रकाशित (२०७४ भदौ २८ गते १७:२४मा अद्यावधिक गरिएको)
फोहोर बन्दै सगरमाथा, धरौटीले काम गरेन
बाबाको माया कति लाग्छ रे ….
अर्थमन्त्रीको सांसद पद दुई वर्षमात्र, गृहमन्त्रीलाई ६ वर्षको चिठ्ठा
स्पेनले हरायो इरानलाई, डियगो कोस्टाले गरे गोल
विवादित प्रवास नीतिबाट पछि हटे ट्रम्प, अब सँगै रहनेछन् परिवारका सदस्य
उरुग्वेसँगै रुस विश्वकपको नकआउट चरणमा
जिल्ला सभापतिलाई गगन-धनराजको पत्र : यो नेतृत्वबाट सशक्त प्रतिपक्षीय भूमिका पनि असम्भव
ठूला यातायात समिति सिन्डिकेट ब्युँतिनेमा विश्वस्त, गरेनन् कम्पनी दर्ता
जिल्ला सभापतिहरुको भेलामा देउवाको चर्को आलोचना
ओलीसँग चिनियाँ राष्ट्रपतिले भने : चिनियाँ रेल छिट्टै काठमाडौं पुग्छ
मेस्सी र रोनाल्डोलाई चुनौती दिँदैछन् इंग्ल्याण्डका ह्यारी केन
न्युरो अस्पतालको नामको अगाडि थपियो उपेन्द्र देवकोटा
रोनाल्डोका टिममेट, जो ‘पोर्चुगिज मेस्सी’ को नामले चिनिन्छदन्
चिनियाँ रेल छिट्टै काठमाडौं पुग्ने राष्ट्रपति सीको विश्वास
२ करोड ३३ लाखमा बिक्यो दुनियाँकै महंगो ब्याग
शिशुको नाम छनोट गर्न जनमत संग्रह !
बन्यो स्यानिटरी प्याडबाट वातावरणलाई जोगाउने मेसिन